Saddex sano ka hor maanta oo kale Kooxaha Heegan iyo Horseed oo wada ciyaaray xilli maanta ay ballansan yihiin… (Yaase adkaaday maalintaas?) – Gool FM
(Muqdisho) 24 Feb 2020. Garoonka Eng Yariisow Stadium oo xiligaas watay magaca Banaadir Stadium ayaa ciyaar aad u xiiso badan ka dhacday ay u dhaxeeysay kooxaha Heegan iyo Horseed ciyaartas ayaa ku soo dhamaatay 2-1 oo ay ku awood sheegatay Naadiga Cawo iyo Malin ee Horseed.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay dardar xooggan ay labada kooxood soo bandhigeen kubad aad loo jecleysto, qeybtii hore ciyaarta ayaana lagu kala nastay 0-0.
Markii dib la isku soo laabtay naadiga Horseed ayaa heshay goolkii ugu horeeyay ciyaarta waqtigaas, waxaana u dhaliyay xiddiga lagu magacaabo Awako, balse Heegan ayaa isku dayo badan sameysay waxayna heshay goolka barbaraha, iyadoo uu u dhaliyey C/risaaq Zalatan ciyaarta ayaa noqotay gar isku mid ah 1-1, balse naadiga Horseed ayaa heshay goolkii guusha kaasoo niyadda ka dilay wiilasha Heegan, waxaana dhaliyay Awako ciyaarta ayaa sidaas ku soo gaba gabooday 2-1 oo ay guusha ku raacday Horseed.
Kulankan ayaa dhacay saddex sano ka hor maanta oo kale xilli galabta ay labadan kooxood Horseed iyo Heegan ku hardami doonaan markale garoonka Eng yariisow Stadium.
Waa kulan mideynaya dhammaan taageerayasha kala duwan, sidoo kale waxaa garoonka lagu arka marka laga tago taageerayasha caadiga ah, ciidamada ay labadan kooxod hoos tagan sida Booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka Militiriga kuwaasoo kala taageersan labadan kooxood ee Horseed iyo Heegan.
– Xasuusta Maanta –